Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu xallin lahaa 384x480 | Wararka IPhone
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu lahaan lahaa qaraar dhan 384 × 480
Xanta waxay bilaabaan inay dareemaan xoog xoogan wajiga diridda 12-ka Sebtember ee soo socota, oo soo bandhigi doonta aaladaha cusub ee shirkadda Cupertino ay u diyaarisay dhammaadka sanadkan 2018 iyo in badan oo ka mid ah sannadka soo socda, waxaa jira hadal hayn badan oo ku saabsan iPhone-ka cusub, laakiin ma iloobi karno iibka ugu fiican ee smartwatch ee suuqa, Apple Watch.
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Apple Watch Series 4 wuxuu xallin lahaa 384 × 480 markaa hubaal way ka fiicnaan laheyd qaabka hadda jira. Tani waxay si tartiib tartiib ah u "xaqiijinaysaa" aragtiyaha ku saabsan shaashadda Apple Watch.
Qaraarkan waxaa lagu heli doonaa iyada oo loo marayo shaashadda microLED waxayna u taagan tahay koror ka imanaya 312 × 390 pixels oo hadda ay bixiso Apple Watch. Tani sidoo kale waa koror la yaab leh, runtiina waxay bixisaa qaraar ka sarreeya kii aan ka helnay waqtigaas asalka iPhone-ka, kaas oo ahaa 320 × 480, oo layaab leh uguyaraan xaqiiqda ah in Apple ay maalgashi badan ku sameyso smartwatch, xaqiiqaduna waxay tahay in dadwaynuhu ogyahay sida looga jawaabo, sidaasna uu ku noqdo kan ugu iibsiga badan aduunka ee casriga ah, suuq aad u cakiran. ay ugu wacan tahay aqbalitaanka hooseeya ee ay ka haysato macaamiisha guud ahaan.
Macluumaadkan waxaa sifeeyey 9to5Mac waxay tilmaameysaa wax horeyba loo xamanayey dhowr toddobaad, in Apple Watch ay qaadan doonto wadada shaashadaha leh dhowr shaashadood, taas oo ah, Apple Watch Series 4 ma kordhin doono oo keliya xallinta shaashadda, laakiin sidoo kale waxay ina tusaysaa wax badan nuxur ahaan maxaa yeelay waxaan lahaan doonnaa guddi dheeri ah sababa laxirirka biriijyada, in kasta oo saacadaha Apple Watch aan wali si aad ah loogu dhawaaqin waxa loo tartamayo. Dhanka kale iyo leh cufnaantaan oo ah 345 pixels halkii inji, waa inaan sugnaa illaa 12-ka marka aan toos ugu noolaan doonno soo bandhigidda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu lahaan lahaa qaraar dhan 384 × 480